प्रियंका चोपडाको ब्रेकअप, को सँग थियो रिलेशन ? – Medianp
प्रियंका चोपडाको ब्रेकअप, को सँग थियो रिलेशन ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २८, २०७४११:४८0
काठमाडौं, २८ माघ । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अहिले हलिउडमा व्यस्त छिन् । उनको प्रेम सम्बन्ध, विवाहको विषयमा सँधै चर्चा हुने गरेको छ । विगतमा उनको नाम बलिउडका कलाकार अक्षय कुमारदेखि लिएर शाहरुख खानसम्म जोडिइसकेको छ । प्रेमको बारेमा खुलेर कुरा नगर्ने प्रियंकाले यसपटक बने आफ्नो ब्रेकअप प्रेमबारे मुख खोलेकी छन्।
‘कृ’ लागेको सिनेमा हलमा ‘शत्रु गते’ को टिजर रिलिज